नवजात मा पीलिया को लागी9घरेलु उपचार - PAMPEREDPEOPLENY.COM - गर्भावस्था-प्यारेन्टिंग
नवजात मा पीलिया को लागी9घरेलु उपचार
घर गर्भावस्था प्यारेन्टिंग बच्चाहरू बच्चाहरू ओआई-लेखाका द्वारा सुबोडिनी मेनन नोभेम्बर १,, २०१। मा
अभिभावक-हुन र नयाँ आमा बुबा मात्र उनीहरूका बच्चाहरू जन्मेको र उनीहरूको ठूलो हुँदैमा स्वस्थ भएको चाहान्छन्। नवजात शिशुलाई स्वागत गर्दा एउटा चीजले सोचेको हुँदैन किनभने नवजात शिशुमा पीलिया हुन्छ।
नवजात शिशु, वा हाइपरबिलिरुबिनेमियामा पनी बच्चाको शरीरमा बिलीरुबिनको उच्च मात्रा हुन्छ। यस अवस्थाले नवजात शिशुलाई यसको छालामा र आँखाको स्क्लेरा (सेतो) मा पहेंलो रment्गीकरण गर्दछ। यो एक धेरै सामान्य अवस्था हो र प्राय जसो केसहरूमा यो बच्चालाई हानिकारक हुँदैन।
बिलीरुबिन पहेंलो रंगको र pig्गीन हो जुन प्राकृतिक रूपमा सबै वयस्कहरू र बच्चाहरूमा उत्पादन हुन्छ, रातो रक्त कोशिकाको टुक्राहरूको उत्पादनको रूपमा। यो बिलीरुबिन कलेजोमा प्रशोधन गरिन्छ र त्यसपछि शरीरबाट पिसाब र मलद्वारा बाहिर निकालिन्छ।
यो प्रक्रिया वयस्कहरू र बच्चाहरूमा सामान्य रूपमा हुन्छ र जब यो प्रक्रिया कुनै पनि तरिकामा अवरुद्ध हुन्छ, यसले पीलिया हुन सक्छ। नवजात शिशुहरूको मामलामा, तिनीहरूका कलेजो अझै पनि बिलीरुबिन प्रशोधन गर्न अपरिपक्व छ र केहि घण्टा लिन सक्दछ, यसलाई प्रशोधन गर्न।
यस अवधिमा, यो सामान्य छ कि बच्चालाई पीलियाको विकास हुन्छ। बच्चाको कलेजो सामान्य रूपमा काम गर्न थाल्दा एक पटक नवजात शिशुको पौंला हराउँछ।
जबकि नवजात शिशु पौंलाको प्राय जसो केसहरूमा चिन्ताको कुनै कुरा हुँदैन, कहिलेकाँही यो अन्तर्निहित समस्याको संकेत पनि हुन सक्छ। लामो समयसम्म नवजात शिशु पीलिया वा पीलिया जुन टाढा जान सक्दैन यसले अन्य चिकित्सा समस्याहरू पनि निम्त्याउन सक्छ। जटिलताहरूमा मस्तिष्क क्षति, सेरेब्रल पाल्सी र बहिरापन समावेश छ।
आज हामी नवजात शिशुमा पीलियाको बारेमा बढी जान्न सक्छौं। हामी केही घरेलु उपचारहरू पनि हेर्नेछौं जसले नवजात शिशुहरूमा पीलियालाई विफल पार्न वा निको पार्न सक्दछन्। थप जानकारीको लागि पढ्नुहोस्।
कुन नवजात शिशु पीलिया हुने सबैभन्दा बढी जोखिममा छ?
जबकि सबै नवजात शिशु पीलिया विकास गर्न सक्दछन्, यो देखियो कि नवजात शिशु पौंलाले निम्न कोटीहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गर्दछ:
शिशुहरू जुन समयभन्दा पहिले जन्मेका हुन्छन्। गर्भवती 37 37 हप्ता पूरा गर्नु भन्दा पहिले जन्मेका बच्चाहरूलाई पीलिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
शिशुहरू जुन राम्रोसँग खुवाउँदैनन्। यो धेरै कारणहरूले हुन सक्छ। धेरै अवसरहरूमा, आमाको दुध ढिलोमा आउँछ। यदि बच्चा स्तनपान गराउन सक्षम भएकी थिइन भने शिशुहरूलाई सुत्र दिइन्छ। तर बच्चालाई अन्य जटिलता छ भने यो पनि सम्भव छैन।
बच्चाको रगत समूह हुन्छ जुन आमाको लागि उपयुक्त हुँदैन।
नवजात पीलिका कारणहरू
सामान्य अवस्थामा, अपरिपक्व कलेजोले बच्चाको शरीरमा बिलीरुबिनको प्राकृतिक मात्रा प्रशोधन गर्न सक्दैन। यसले नवजात पीलिया निम्त्याउन सक्छ। यो सामान्यतया धेरै चिकित्सा हस्तक्षेप बिना दूर जान्छ।
बर्थि process प्रक्रियाको दौरान चोट वा बच्चा जन्मको बेला हुने आन्तरिक क्षतिले नवजात शिशुमा पीलिया हुन सक्छ।
बच्चामा कलेजोको समस्या हुन सक्छ र पन्त्राको कारण हुने विसंगति हुन सक्छ।
असामान्य रातो रक्त कोशिका बिलीरुबिन को असामान्य उच्च स्तर को एक कारण हुन सक्छ।
संक्रमणले नवजात शिशुमा पीलिया पनि निम्त्याउन सक्छ
नवजात शिशुमा पीलियाका लक्षणहरू के-के हुन्?
टेलिमेस्ट्रीमा ट्राभल लाइन महिला हातको लागि
नवजात शिशुमा पनी सजिलै चिन्न सकिन्छ। यो सामान्यतया जन्म पछि एक वा दुई दिन भित्र सुरू हुन्छ र जन्म पछि days दिन पछि शिखरहरू। छालाको पहेंलो रंग सामान्यतया अनुहारबाट शुरु हुन्छ र त्यसपछि बिस्तारै शरीरको बाँकी भागमा पनि फैलिन्छ।
तपाईं बच्चाको छालालाई हल्का प्रेस गरेर सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। पंडियाको अवस्थामा, थिचेको क्षेत्र पहेंलो हुन्छ।
तपाईंको बच्चाको डाक्टरलाई कहिले सम्पर्क गर्ने?
तपाईको डाक्टरसँग कुरा गर्नु उत्तम हुन्छ तपाईले आफ्नो बच्चामा पक्कै शंका गर्नुहुन्छ। धेरै जसो केसहरूमा बच्चा र आमा जन्माउने 72२ घण्टामा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन्छन्। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, शिशुमा पक्कै पनि जाँच्न महत्वपूर्ण छ। निम्न संकेतहरूको लागि बाहिर हेर्नुहोस्:
तपाईंको बच्चाले राम्रोसँग खाँदैन। बच्चा थकित र सुस्त देखिन्छ। उच्च-पिच्ड रोएको समस्या पनि संकेत गर्दछ।
बच्चामा पहेलो रंग गाढा छायामा बदलिन्छ।
शंकास्पद पनीरस फैलिन्छ।
बच्चालाई १०० डिग्री फरेनहाइटको ज्वरो छ।
नवजात मा पीलिया को लागी घरेलु उपचार
नवजात शिशुमा पक्कै सामान्यतया पहिलो केही दिनमा यो समाधान हुने क्रममा बच्चालाई राम्रोसँग खुवाउन र लक्षणहरू अझ बढी देखिएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि बाहेक अरू केही गर्नु हुँदैन।
यदि पीलिया उच्च देखिन्छ भने, बच्चा सामान्यतया अस्पतालमा राखिन्छ र फोटोथेरापीको सिकार हुन्छ। फोटोथेरापीले बच्चाको शरीरमा बिलीरुबिन बिच्छेद गर्न मद्दत गर्दछ। यदि त्यहाँ कुनै अन्य मुद्दा छैन भने, तपाईं पनीसलाई निको पार्न केही घरेलु उपचारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यदि बच्चा अब पौंडामुक्त छ भने यसको रोकथाम गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि पौंलालाई सहयोग पुर्‍याउन यदि बच्चालाई फोटोथेरापीको आवश्यकता पर्दैन भने, तपाइँले बच्चालाई सूर्यको किरणमा पार्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चालाई हल्का सूर्यको प्रकाशमा केवल एउटा डायपरसहित समात्नुहोस्। बच्चालाई सिधा वा तीव्र सूर्यको प्रकाशमा नलगाउनुहोस्, किनकि बच्चा घाम लाग्न सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि बच्चा लामो समयसम्म लुगा नलगाईकन बच्चा चिसो हुन सक्छ।
गहुँ घाँस को रस
गहुँ घाँसले बच्चाको शरीरबाट विष हटाउन मद्दत गर्दछ। यदि बच्चा सुत्र दूध खुवाइन्छ भने, गहुँ घाँस को रस को केही बूँदें बच्चालाई खुवाउनु अघि सूत्रमा थप्न सकिन्छ। यदि बच्चालाई स्तनपान गराइएको छ भने आमाले गहुँको घाँसको रस खानुपर्दछ, किनकि बच्चाले त्यसलाई स्तनको दूधबाट ग्रहण गर्नेछ।
बच्चालाई बारम्बार खुवाउनु पर्छ। यदि कुनै कारणले बच्चालाई स्तनपान गराउन सकिदैन भने, फॉर्मूला दूध दिइनु पर्छ। प्रत्येक दिन १२ सम्म फिडि your तपाईंको बच्चाको लागि राम्रो हुनेछ। लगातार फीडिंगले बिलीरुबिनलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ र कलेजो राम्रोसँग कार्य गर्दछ। बच्चा पनि राम्रोसँग हाइड्रेटेड रहनेछ।
अस्थायी रूपमा स्तनपान रोक्नुहोस्
केही बच्चाहरूमा आमाको दुधले बच्चालाई पीलिया हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आमाले केही समयको लागि स्तनपान रोक्नुपर्नेछ। यसै बीचमा, बच्चालाई सुत्र राम्रोसँग खुवाउनुपर्दछ र बच्चाले आमाको दूधको लागि तयार हुँदा राम्रो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आमाले दुध पम्प गरिराख्नुपर्दछ।
ज़िजिफस जुजुबा एक्सट्रैक्ट
जुज्यूबको निकासी नवजात पौंडी निको पार्न लाभदायक मानिन्छ। पनीसलाई सहयोग पुर्‍याउन यस निकायको केही थोपाहरू बच्चालाई खुवाउन सकिन्छ।
सूत्रको साथ पूरक
यदि बच्चालाई फार्मूला खुवाइदैछ भने, तपाइँको डाक्टरले पूरक सुझाव दिन सक्छ जसले बच्चाको पीलिया निको पार्न मद्दत गर्दछ।
विशेष सूर्य बत्तीहरू अस्पतालमा दिइएको फोटोथेरापीको वैकल्पिक विधिको रूपमा उपलब्ध छन्। बत्ती थेरापीले बिलीरुबिनलाई भत्काउन मद्दत गर्दछ। यो त्यसपछि बच्चा द्वारा मूत्र मार्फत बाहिर निकाल्छ।
बिलीब्लान्केट भनेको बच्चालाई घरमा फोटोथेरापी प्रदान गर्ने एउटा तरिका हो। बच्चा कम्बलमा बेर्ने हुन्छ र पौंसको साथ मद्दतको लागि फोटोथेरापी दिइन्छ।
कसरी प्राकृतिक saggy स्तन कडा गर्न
हर्बल पूरक आमा द्वारा खपत गर्न
आमाले हर्बल पूरकहरू कमफ्रे चिया, डान्डेलियन चिया र क्याटनिप खपत गर्न सक्दछ। यी जडिबुटी उत्पादनहरू प्राकृतिक रूपमा डिटोक्सिफाइifying हुन्छन् र बच्चाले स्तनको दुध मार्फत यसको फाइदा प्राप्त गर्दछ।
कसरी एक महिनामा moobs बाट छुटकारा पाउने
कसरी कपाल को लागी मेथी प्रयोग गर्ने
कसरी कम फ्याट पनीर बनाउन
रेशमी साडीमा दक्षिण भारतीय अभिनेत्री